Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya degmooyinka uu tagay waxaa kamid ah; Wadjir, Hodan, Howl wadaag, Warta nabadda, Yaaqshiid, Waaberi, Xamarweyne, Shangaani, Cabdalcasiis, isagoo warbixino ka dhageystay saraakiisha ciidamada.
Mudane Kheyre ayaa Isgoyska Bakaaraha kula kulmay Ciidamo ka tirsan Howlgalka Xasilinta Amniga Caasimadda oo howlo baarintaano ah xilligaas ku howlanaa, wuxuuna bogaadiyay sida wanaagsan ee ay ciidamadu u gudanayaan waajibaadka qaran ee loo xilsaaray, taasoo ay ku jiifaan maaliyiin Soomaalia ah oo ku nool magaalada Muqdisho.
Isgoysyada Qaar wuxuu Ra’iisul Wasaaruhu kula kulmay dadweyne Soomaaliyeed oo dhallinyaro iyo waayeel isugu jiray, kuwaa oo qaarkood ku gudajiray howlo ganacsi, iyadoo saacaddu ay ka gudubtay 12:00Am Waqtiga Geeska Afikada Bari.
Qaar kamid ah Dadweynaha uu Waddooyinka kula kulmay Mudane Kheyre ayaa bogaadiyay go’aanka Xukuumadda ee lagu Xasilinayo Amniga Caasimadda, waxayna ra’iisul wasaaraha u sheegay in ay dareemeen isbadal iyo xasillooni ku timid Ammaanka Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
​Wafdi uu hogaaminayo Ra’isal Wasaare Khayre oo gaaray Addis Ababa
MUQDISHU, Somalia- Wafdi uu hogaaminayo Ra’isal wasaaraha Dalka Somalia, Xasan Cali Khayre ayaa goordhaweyda gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia iyagoo ka qayb galaya shirka Madaxda IGAD ka yeelanayaa xaaladda Suudaan-ta Koonfureed.
​RW Khayre oo gaarey Magaalada Doxa [Sawirro]
RW Kheyre oo ka warbixiyey Waxqabadka Dawladda Somalia
RW Somalia oo la kulmay qaar kamid ah Safiirrada beesha Caalamka
DAAWO: RW Kheyre oo difaacay waxqabadka xukuumadiisa xilli Xildhibaano mucaaradeen